Waxaad ka imaatey wadan kaagii hooyo, hadana waxaad usoo raadsatey nabad galiyo Germanka? Hadaba waa in aad sida ugu dhakhsaha badan u raadsatid talo, sababtoo ah sharciga qaxootiga ee Germanku iyo xuquuda lagu joogaayo aya aad u adag. Flucht punkt waxey talo kaa siineysa su’aalahaa ku saabsan nidaamka sharciga qaxootiga iyo xaqa joogitaanka.
Waanu madax banaan nahey, xafiis la taliyo qaxootiga oon dawlad aheyn baan nahey, eegeyn xaladaada sharciyeed, dhalashadaada ama diintaada.
Waxaan la hadleyna:
Nabad galyo doonka inteyna wareysiga qaxootinimada uuna xafiiska federalku ka qaadin
Nabad galyo doonka oo dacwadiisa lagu jiro
Nabad galyo doonka diidmo laga siiyey dacwadiisa
Nabad galyo doonka dagaalka sokeeye
nabad galyo doonka haysan sharqi lagu joogo.
Mac’luumaadka su’aalaha ku saabsan xeererka qaxootiga iyo xaqa joogitaanka
Caawimaad hadal is weydaarsiga aad la yeelaneysid maamuleeyaasha
Caawimaad diyaarinta dacwada
Waano iyo gacan qabashada dadka caawinaaya nabad galyo doonka
Diyaarinta shaqada af lawyerka, doktorka iyo doktorka nafsiga.
Si aan talo wax ku ool ah kuu siino, fadlan soo qaad waraaq kasto ku saabsan dacwadaada qaxootinimo, xuquuda aad ku joogtid iyo sababta soo bixitaankaaga. Haddii ay suurto gal tahey, fadlan soo kaxeyso qof kuu turjuumi karo. War bixintaa iyo waraqahaa aad noo keentid waxaan u isticmaaleyna sii sir ah.
Waqtiga la kulanka
Flucht•punkt wuxuu kaala talinaayaa xaqa aad ku joogi. Haddii aad qabtid dhiib bulshadeed sida su’aalaha ku saabsan sharciga tageerka codsiga magangalyo, guryaha etc., fadlan ka codso xafiis bulshadeed.
Flucht•punkt waxaay talo siineysa qaxootiga aan heysan deganaasho joogto ah. Haddii aad deganaasho joogto ah heysatid, ood qabtid su’aalo ku saabsan viiso booqashadeed ama isku keenidda qoyska ku nool wadanka dibadiisa, fadlan su’aal lawyer ama xafiis kale oo la taliye ah.